“Nanova ny fomba fijery ara-toekarena ny mpitondra fanjakana” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mpandraharaha tsy miankina ianao. Inona, ho anao, no mangeja ny tontolon’ny fandraharahana ?
Maro ireo mpandraharaha no te hampivelatra ny sehatr’asa ataony. Vokatry ny kirizy anefa, dia mihasarotra kokoa izany satria tsy ampy ny ho enti-manana hanitarana izany tetikasa izany. Raha voatery tsy maintsy mindram-bola ny mpandraharaha, dia tsy mahafeno ny antoka ilaina izy. Ankoatra izany dia mavesatra ireo toromarika sy ireo fombafomba tokony harahina ary ny hetra aloa amin’ny fanjakana. Isan’ny tena sakana izany, ary ela loatra vao mivaly.
Ho anareo mpandraharaha tsy miankina, inona no singa hitanareo hahafahana milaza fa hihatsara ny toekarena amin’izao Repobilika fahefatra izao ?
Roa no singanina amin’ireo maro azo lazaina. Andaniny, efa manomboka miverina tsikelikely ny famatsiam-bola avy any ivelany, izay mampiroborobo ny seha-pihariana sy ny seha-pifandraisana ara-barotra. Indrindra mampitombo ny tolotr’asa eto amintsika. Ankilany, nanova ny fomba fijery ara-toekarena ny mpitondra fanjakana ka nametraka ny “politika manokana ho an’ny fanohanana misimisy kokoa ny orinasa madinika sy salantsalany” ho laharam-pahamehana. Fantatra mantsy fa maro kokoa ny orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika no te hivelatra nefa tsy ampy tohana tekinika sy am-bola. Mahavelom-bolo anay mpandraharaha io fanovana famindra io.
Inona kosa no andrasanareo na irinareo, na takinareo mihitsy mba hampahazo aina ny tontolon’ny fandraharahana sy hampivelatra anareo mpandraharaha tsy miankina ?
Voalohany, mba hampidirana an’ireo mpandraharaha tsy ara-dalàna ho amin’ny ara-dalàna dia mila hamoraina ny toromarika an-taratasy na ny “procédure administrative” eo anivon’ny fandoavan-ketra. Ankoatra izay dia mila hamaivanina ny sandan’ny tataon-ketra tokony haloa, arakaraka ny haben’ny orinasa tsirairay. Ary farany, mila hamoraina ny fomba fandoavana izany.
Isan’ny re matetika, indrindra avy amin’ny tanora te handraharaha, ny filazana fa tsy misy ny vola na misy ihany ny mpampindrana saingy lafo. Ahoana no fahitanao izany ? Misy andraikitry ny fanjakana foibe ve ny fanovana izany ?
Marina tokoa izany satria anisan’ny olana sedrain’ny tanora ankehitriny mihitsy ireo voalaza ireo. Be no manana tetikasa tsara nefa tsy ampy tohana am-bola na tsy ampy antoka raha mila mindram-bola. Izany indrindra no antony nananganana ity orinasa tantaniko ity. Marihina fa mpandraharaha avokoa no nanangana azy ity. Izahay dia miezaka manampy ireo tanora manana tetikasa marim-pototra ka mila mindram-bola eny anivon’ny banky amin’ny fanomezana antoka fanampiny sy ny fanampiana azy ireo amin’ny fanangonana ny antontan-taratasy na ny dosie rehetra ilaina.
Lazaina fa hampandroso ny firosoana amin’ny fitsinjaram-pahefana. Marina ve izany ? Inona no arofanina ilaina apetraka mba hahomby izany ka tsy ho mpandany vola fotsiny ny any amin’ny vondrom-paritra intsinjaram-pahefana toy ny kaominina ?
Raha ohatra ka olona tena mahalala sy mahafehy marina ny faritra feheziny no olona nosafidina hitantana ny toerana iray, dia mampandroso ny fitsinjaram-pahefana satria hisy tokoa ny fifaninanana eo amin’ny samy faritra ary ny fijerena sy fiarovana akaiky ny filan’ny mponina amin’ny toeram-piadidian’ny olom-boafidy. Mazava ho azy fa ny fanjakana foibe no tokony mametraka kaomisiaonina manokana hanara-maso ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana amin’ny fijerena ifotony ny fivoaran’ny mponina amin’ny alalan’ny fanaovana fanadihadiana ara-potoana ny mponina, ny fijerena ny fivelaran’ny seha-pifandraisana ara-barotra ao amin’ny faritra. Soritako manokana fa tokony hahaleotena io kaomisiaonina manokana io mba hahomby ny asany.
Ny azonao ampitaina ?
Ho fanarenana ny toekarena, dia mila mifanome tanana ny tsirairay. Izany foto-pisainana izany indrindra no nananganana ny solidis garantie, izay miezaka hatrany manome ireo tolotra momba ny antoka mifanaraka amin’ny sehatr’asa sy ny filan’ny orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika. Izay manana ny anjara toerany manokana eo amin’ny sehatry ny findramam-bola eny anivon’ny banky. Hitanay ny tombony eto amin’ny sehatra misy anay. Raha samy mahay manao toa izany ny sehatra tsirairay dia hahazo hery lehibe haingana ny toekarem-pirenena.